သတင်း - စစ်မှန်သောသားရေနှင့် PU Faux သားရေကိုမည်သို့ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သနည်း
သားရေအစစ်နှင့် PU အတုသားရေအစစ်ကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ
အချို့သောဖောက်သည်များသည်စစ်မှန်သောသားရေနှင့် PU အသားအရည်ကိုခွဲခြားရန်မည်သို့မကျွမ်းကျင်ပါ. Oဒီဆောင်းပါးမှာငါတို့ကကျွမ်းကျင်မှုတွေအကြောင်းပြောပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကူညီလိမ့်မယ် ပိုကောင်းတယ် သားရေ၊ PU စစ်စစ်ကိုခွဲခြားပါ သားရေတု.
ယေဘူယျအားဖြင့်၊သားရေအမျိုးအစားများစွာရှိပြီး၎င်းတို့သည်အဓိကအားဖြင့်နွား၊ ဆိတ်၊ သိုး၊ ၀ က်စသည့်တိရိစ္ဆာန်များမှဆင်းသက်လာသည်။ ၎င်းတို့ကိုအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးမှအောက်ပါအမျိုးအစားများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။
စစ်မှန်သောသားရေကိုပိုမိုနူးညံ့ပျော့ပျောင်း။ သဘာဝနှင့်ထိတွေ့စေပြီးမျက်နှာပြင်ကိုနှိပ်သောအခါပြန်လည်သန်စွမ်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။ Faux သားရေသည်အတု ပြုလုပ်၍ နူးညံ့ပြီးမာကျောပြီးမကြာခဏပလပ်စတစ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သားရေအစစ်အမှန်နှင့်ယှဉ်လျှင် PU သားရေသည်ဆွဲဆန့်ရာတွင်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးအရောင်ပြောင်းတတ်သည်။
သားရေအစစ်နှင့်သားရေအတုသည်အနံ့ကွဲပြားသည်။ သားရေအစစ်ကိုတိရိစ္ဆာန်အရေနှင့်ပြုလုပ်ထားသဖြင့်၎င်း၊’s သာယာသော အထူးသဘာဝအသားရေရနံ့တွင်အထူးအနံ့ရှိသည်။ Faux သားရေသည်အများအားဖြင့်ဗီနိုင်းသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ကဲ့သို့ဓာတုရနံ့ဖြင့်အနံ့ခံသည်။
သားရေနှင့်ကျောဘက်အပေါ်ယံပိုင်းအပေါ်ယံပိုင်းအပေါ်ယံလွှာသည်အသားရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးကွဲပြားသည်။ ၎င်းသည်စစ်မှန်သောသားရေကျောဘက်အတွက် suede အဖုံးဖြစ်ပြီး faux သားရေကိုပုံမှန်အားပိတ်စသို့မဟုတ်ပါးလွှာသောအသားဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
စစ်မှန်သောသားရေသည်မီးကိုခုခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားပြီးမီးသည်ချက်ချင်းလောင်ကျွမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ၊ အနည်းငယ်လောင်ကျွမ်းရုံသာမကမီးရှို့ထားသောဆံပင်ကဲ့သို့အနံ့ပါသောအတုသားရေသည်မီးစွဲလောင်ပြီးပလတ်စတစ်ကဲ့သို့လောင်ကျွမ်းလိမ့်မည်။ ပလတ်စတစ်သည်ရေနံနှင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ပလတ်စတစ်သည်အလွယ်တကူလောင်ကျွမ်းနိုင်သည်။
ငါတို့သည်သားရေစစ်စစ်ပေါ်တွင်ရေအနည်းငယ်ကိုချလျှင်၎င်းသည် (ရေစိုအသားရေ မှလွဲ၍) စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းအမှန်တကယ်စုပ်ယူလိမ့်မည်။ ဤစုပ်ယူမှုသည်ပစ္စည်းကိုပျော့ပျောင်းနေစေရန်ကူညီသည်။ PU သားရေသည်စုပ်ယူနိုင်စွမ်းမရှိသော်လည်းရေသည်၎င်း၏မျက်နှာပြင်မှညာသို့လျှောထွက်လိမ့်မည်။